Phuhlisa iinjongo ngaphambi kokuba usetyenziso lweSelfowuni | Martech Zone
Phuhlisa iinjongo ngaphambi kokuba kusetyenziswe iApp eyiFowuni
NgoMvulo, Agasti 8, 2011 NgoLwesibini, Septemba 4, 2012 Douglas Karr
Abantu abalungileyo kwiWebtrends (umxhasi) bakhuphe iphepha elimhlophe elimangalisayo kuMlawuli wabo we-Mobile Analytics, U-Eric Rickson. Ukuphuhliswa kweQhinga lokuKhula okuShukumayo noTyalo-mali uhamba kwizalathi zentsebenzo eziphambili kwisicwangciso esilihambileyo. Ngaphandle kwesihloko seselfowuni kubahlalutyi, Esinye seziqendu eziphambili endizifumeneyo yile:
Rhoqo, abathengisi beqa inyathelo elibalulekileyo lokuchaza nokucwangcisa isicwangciso sentengiso esiphathwayo, esiya ngqo kuphuhliso lwesicelo endaweni yoko. Uninzi lungena kumabala emidlalo kusetyenziswa i-iPhone, luwele iminwe, kwaye luyathemba ukuba luya kufezekisa into elungileyo. Abanye bakhupha ii -apps zeselfowuni kuwo onke amaqonga aphambili kwaye bayathemba ukuba enye iya kubanjwa. Rhoqo iinkampani zipapasha usetyenziso kwaye emva koko zichithe izixhobo ziligcina. Kwaye abanye bakhetha ukugxila kwiwebhu ephathekayo kuba bakholelwa ukuba iiapps ziya kuhamba ngendlela yedayinaso.
Kudala sibhala kakhulu malunga UkuThengiswa kweSelula apha eMartech. Njengomndilili, yenye yezona zikhula ngokukhawuleza kodwa zilandelwe kancinci. Iinkampani ezihlasela iselfowuni zivuna izibonelelo, nangona kunjalo. Umthengisi we-eBay uphumelele ngaphezulu kwe- $ 2.5 yezigidigidi kwintengiso ngeselula ngo-2010 kwaye ilindele ukuphinda kabini loo mali ngo-2011.
Qiniseka ukuba ukhuphele iphepha elimhlophe ngesikhokelo esinzulu kwiimethrikhi abanokuthi bazithengise abathengisi ukubeka esweni kunye nokuphucula isicwangciso sabo esiphathwayo. Ngama-450,000 eeNkqubo ezingaphandle, kulula ukulahleka kumxube. Ukuphuhlisa isicwangciso esilihambileyo-ke ukuhlasela iqonga yingcebiso engcono kunokulahla itoni yemali ekuphuhliseni usetyenziso olungafunekiyo, olufunayo, okanye olungaboneleli ngenzuzo kumgca wakho osezantsi.
tags: izicelo zeselulaapps mobile
I-infographics: Ukwenza iikhowudi ze-QR zivavanywe ngokulula
Ungayisebenzisa njani iTwitter
Agasti 12, 2011 ngo-11: 31 PM
Enkosi, uDouglas ngengcebiso malunga nephepha likaEric Rickson… ukufunda okunomdla. Njengomphuhlisi oshukumayo, ndonwabe ngakumbi malunga noqikelelo loPhando lukaStanley malunga nabasebenzisi beintanethi abahamba bedlula abasebenzisi be desktop ngo-2014.
Uyazibuza ukuba zingaphi ii -apps eziza kubakho ngelo xesha?
Owu, kunye nesicatshulwa sakho sama-450,000 eeapps sasenzelwe iVenkile yeApple yeApple- zininzi ezinye ezikhoyo (kungekudala zizakuba ngaphezulu kweApple!) Kwivenkile kaGoogle, kwivenkile yeAmazon, kunye nezo ziqhutywa yiRIM, iMicrosoft, njl.
Agasti 16, 2011 ngo-10: 28 PM
Ulungile ngokupheleleyo: ukubalwa kweapp! Enkosi!